काठमाडौं १६ पुस । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त पाँचवटै पार्टीभित्र समानुपातिकतर्फका प्रदेश सांसद छनोटसँगै भाँडभैलो मच्चिएको छ । विशेष आरक्षणका रूपमा राज्यका नीति-निर्माण तहमा उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र...
प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र सँगसँगै
काठमाडौं १६ पुस । सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र (राजधानी) तोक्ने निर्णय यही साता गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख र केन्द्रको टुंगो नलागेसम्म राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नै प्रभावित हुने देख...
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फको आधिकारिक परिणाम घोषणा भएको एक महिना बित्दा पनि कांग्रेसले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुको साटो सर्त थप्दै गएपछि सरकारको नेतृत्व गर्न पर्खिरहेको एमाले आक्रोशित ब...
‘गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र’
काठमाडौं १६ पुस । वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताद्वयले पार्टी एकता हुन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन् । वामदेव गौतमद्वारा लिखित ‘नेपाल नवनिर्माण महाअभियान’ पुस्तक विमोचनमा शनिबार एमालेका अध्यक्ष के...
कांग्रेसका-७० कटेका नेताले विश्राम लिनुपर्छ
काठमाडौं १६ पुस । कांग्रेसका युवा नेताले पार्टीको भविष्यका लागि पहिलो पुस्तालाई विश्राम लिन आग्रह गरेका छन् । नेतृत्वको रणनीतिक असफलता र पुरानो कार्यशैलीबाट अब पार्टी नचल्ने भन्दै उनीहरूले ७० वर्ष कट...
पौडेल किन हस्ताक्षर नगरि निस्के राती १० बजे बालुवाटारबाट ?
काठमाडौं १५ पुस । समानुपातिक सांसद छनोटलाई लिएर कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र पौडेल पक्षबीच विवाद चर्किएको छ । दिनभरको चर्को विवादका बीच शुक्रबार राति करिब १० बजे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति...
आफ्नै बाबुवाट बारम्बार बलात्कारपछि गर्भवती भएपछि ….
काठमाडौं १५ पुस । काभ्रेको पनौती नपा ११ भुमिडाँडामा १७ बर्षिया छोरीले आफ्नै बाबुले पटक पटक बलात्कार गरेको जाहेरी दिएकी छिन् । सुन्दा पत्ताउन मुस्किल यो घटनापछि बाबुको विश्वासमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा ग...
पशुलाई सुत्केरी भत्ता, ब्याएका प्रत्येक पशुलाई २५ सय
काठमाडौं १५ पुस । कृत्रिम गर्भाधान बाट ब्याएका पशुलाई भत्ता दिन थालिएको छ । महिलालाई गर्भवती हुँदा पोषण तथा आहारका लागि सत्केरी भत्ता दिएजस्तै कृत्रिम गर्भाधानबाट ब्याएका पशुलाई पनि सुत्केरी भत्ता दिन...
काठमाडौं १५ पुस । प्रमुख निर्बाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादबकी बुहारी प्रमिलाकुमारी यादव अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटाबाट प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभा सदस्यमा निर्बाचित हुन सफल भएकी छिन् । प्रमुख आ...
किन वामदेव गौतमले राखे बैठकमा फरक मत ?
काठमाडौं । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय सभा गठनपछि मात्र नयाँ सरकार बन्ने फरक बुझाइमा छन् । बिहीबारको स्थायी समिति बैठकमा गौतमले कांग्र...
अब राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुनुपर्ने कांग्रेसको तर्क, पहिले सरकार नै गठन हुनुपर्ने एमालेको दाबी दलहरूबीच नयाँ सरकार गठन राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अघि कि पछि भन्नेमा विवाद बढेको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन...
राजपा नेपालको पार्टी कार्यालय तोडफोड
काठमाडौं १५ पुस । एकजना नेतालाई समानुपातिकबाट सांसद नबनाएको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको काठमाडौँस्थित कार्यालयमा तोडफोड गरिएको छ । राजपा नेपालले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको समानुपातिकको सूचीमा ने...
सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्न नसक्दा बहस पेचिलो बन्दै गएको छ। चिया पसलदेखि उच्च राजनीतिक नेतृत्व प्रदेश राजधानीको बहसमा जुटेका छन्। नेताले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रमा राखेर विभिन्न सहरको नाम चर्चा...
काठमाडौं १५ पुस । कुवेतको नेसनल खराफी कन्स्ट्रक्टिङ कम्पनीका ३ सय नेपाली कामदार अलपत्र परेको ३ महिना भइसक्यो । काम बन्द भएको र कम्पनीले खाना खुवाउन छाडेको पनि तीन साता नाघिसक्यो । यी कामदारले सात मह...
गाउँपालिकामा पराजित, समानुपातिकबाट सांसद
भूमे गाउँपालिका–७, गुनामकी ढाँटी सुनार भनिने आशा स्वर्णकार नेकपा एमालेका तर्फबाट ५ नम्बर प्रदेशसभा सदस्य बन्दै छिन् । एमालेले समानुपातिक सूचीबाट उनलाई प्रदेशसभा सदस्य बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । निर्वा...
पदमा नबस्ने मन्त्री गिरीको चेतावनी, राजीनामा दिन दबाब
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सचिवहरू र मुख्यसचिवविरुद्ध मन्त्रीहरू आक्रोशित भएका छन् । बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित आधा दर्जन मन्त्रीले निर्वाचनपछि सचिवहरूले ...
काठमाडौं १४ पुस । बहुमतीय प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने अडानबाट एमाले पछि हट्ने भएको छ । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्ने अडान राखेर कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन ...
तुलसी गिरीलाई २५ लाख !
काठमाडौं १४ पुस । सरकारले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरीलाई आर्थिक सहायताबापत २५ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार डा. गिरीलाई उपचारका...
श्रीमानको औला काटेर पोलेर खाने श्रीमती..
काठमाडौं १४ पुस । दाङमा एक महिलाले आफ्नै श्रीमानको हातका औला काटेर खाएकी छन्। दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १ भम्के छोटेकी ६४ वर्षीया रिसमी महतराले आफ्नै श्रीमान् ६४ वर्षकै चन्द्रबहादुर महतराको हातका औल...
काठमाडौं १४ पुस । देशभरका ११ वटा उद्योगले मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने गुणस्तरहीन खाने तेल र घिउ उत्पादन तथा आयात गर्दै आएको तथ्य फेला परेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बाराका एग्रो प्...